Appilikeeshinoota Java LibreOffice keessatti kaachisuuf si dandeessisa. Yeroo appilikeeshinootni Java ooftuu baxxee keetii argachuu yaalan, gaaffiin ni banama.
JRE dursee ijaarameera:
JRE fayyadamuu barbaaddu filadhu. Sirnaalee muraasa irratti, amma tarreen guutamutti xiqqoo eeguu qabda. Sirnaalee muraasa irratti, qindaa'ina kee jijjiirame fayyadamuuf LibreOffice lamkaasuu qabda. Daandiin gara JRE jala sanduuqa tarreetti mul'ata.
Daandii ukaankaa hundee JRE kompiwuutara kee irraatti dabala. Daandichi gongee dhaamsaa armaan gadii keessatti raawwata.
Gongee dhaamsaaUlaagaalee Jalqabaa Java bana.
Gongee dhaamsaa Class Path bana.